वर्षा घटे पनि कुलेखानीमा पानीको सतह झन् झन् बढेपछि मिनेट मिनटमा निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था ….::Nepal's Digital Paper
वर्षा घटे पनि कुलेखानीमा पानीको सतह झन् झन् बढेपछि मिनेट मिनटमा निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था ….
३ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मकवानपुरको कुलेखानी जलाशयलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । हाल पूर्ण क्षमतामा चलिरहेको कुलेखानीमा कुनै पनि बेला जोखिम निम्तिन सक्ने निष्कर्ष निकालेर प्राधिकरणले उच्च निगरानीमा राखेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार हाल कुलेखानी भरिन ३ मिटर मात्रै बाँकी छ । कुलेखानीको जलाधार क्षेत्रमा हाल वर्षाको अवस्था सामान्य भए पनि कुलेखानीमा पानीको सतह बढ्ने क्रम सामान्य छैन । वर्षा घटेपछि गरिएको मापनमा पनि कुलेखानीको सतह प्रति १० मिनेटमा १ सेन्टिमिटरसम्म बढेको पाइएको थियो । यसअनुसार ६० मिनेट अर्थात् एक घण्टामा कुलेखानीमा ६ सेन्टिमिटरसम्म पानी भरिने अवस्था छ ।
अहिले आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाइएको भए पनि घण्टामा ३ सेमिन्टमिटर मात्रै सतह घट्छ । गत साताजस्तै भारी वर्षा भएमा दुई घण्टामै कुलेखानी भरिने अवस्था रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले कुलेखानीलाई प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाले निगरानी र सुरक्षा विश्लेषण गरिरहेका छन् । कुलेखानी खोल्नु परेमा मकवानपुर, रौतहट लगायतका जिल्लाका तल्लो तटीय क्षेत्रका जिल्लाका बासिन्दालाई असर पार्न सक्छ ।
क्षमताभन्दा बढि पानी राख्दा बाँधमा जोखिम हुने भएकाले कुलेखानी भरिनासाथ खोल्नुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । स्थितिलाई नियन्त्रणमै राख्न र तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै सूचना पुर्‍याउन पनि कुलेखानीमा यो वर्षा अवधभिर नै उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि विभिन्न प्रसारणलाइनाबाट भारतको बिहारतर्फ विजुली निर्यात भइरहेको छ । नेपालले विद्युत् आदान प्रदान समितिमार्फत विजुली भारत पठाउने गर्छ ।